म भुत होइन तर बाटोमा हिन्दै गर्दा म संग धेरै मान्छे डराउँछन् ! कुमारी सुबेदि ‘हेर्नुहोस भिडियो’ | Samacharpati म भुत होइन तर बाटोमा हिन्दै गर्दा म संग धेरै मान्छे डराउँछन् ! कुमारी सुबेदि ‘हेर्नुहोस भिडियो’ – Samacharpati
म भुत होइन तर बाटोमा हिन्दै गर्दा म संग धेरै मान्छे डराउँछन्, हो यस्तै भन्दै हुनुन्छ कुमारी सुबेदि । कुमारी सुबेदि मोरंग जिल्ला पथरी गाबिसमा जन्मिनु भएको छ । उहाँले आफ्नी ८२ बर्षीय आमालाई पाल्दै हुन्छ, हाल उहाँ काठमान्डौको गौशालामा बस्नुहुन्छ। जस्ताको टहरामा बस्ने सुबेदिलाइ छिमेकि दाजु रबिन जी लिनु भयो। रबिन जी अहिले डाक्टर हुनुन्छ ।
मलाइ गाडीमा समेत चडाउदैनन, गाडीमा चडाउन पनि डराउछन, कतै यसले भाडा त नदिने होइन भनि । यस.यल.सी पास गरेकी सुबेदिलाइ शंकर रिजालले चलचित्रमा खेलाउनु भएको छ। अप्रेसन गरेर उँहाले आफ्नो अनुहारलाइ राम्रो बनाउन चाहनुन्छ तर आर्थिक स्तिथि कमजोर भएकाले म राम्रो बन्न सकिन । हामीजस्तालाई सबैले घिणाको नजरले हेर्छन, घर बेटीले कोठा समेत दिदैनन यस्तै यस्तै दुखका कुरा सुनाउदै हुनुन्छ कुमारी सुबेदि
हेरौ उहाँसंग गरिएको कुराकानी
मेरो नशा नशामा संगीतको रगत बगेको छ भन्छिन यी चेली ! को हुन् यिनी ?(भिडियो सहित)